Zmags: Infographic Viewer na Nkesa | Martech Zone
Zmags: Infographic Viewer na nkesa
Na Tọzdee, Septemba 25, 2012 Na Tọzdee, Septemba 25, 2012 Douglas Karr
Anyị na-ala azụ oge niile n'ịmepụta ihe ọmụma ederede dị larịị n'ihi na ha bụ ihe mgbu dị na isi iji kesaa. Ndị ahịa anyị, Delivra, mere ọmarịcha ihe ngosi nka na-atụle email abụọ… ndị ọma na ndị ọjọọ. Nsogbu a nwere akwụkwọ ntanetị bụ na ọ naghị adaba na ọtụtụ nhazi ọdịnaya. I nweghi ike iwere ihe omuma ihe nke bu pikselụ 1,000 n'obosara ma tinye ya nke ọma n'ime mpaghara obosara pixel 600.
Onye nlere Zmags na nnapụta! Iji iframe, anyị nwere ike ịmepụta onye na-ekiri ihe na 1 peeji nke nwere ihe ngosi dị na ya. Anyị nwedịrị ike ịgbakwunye njikọ na nkụnye eji isi mee onye nkiri na weebụsaịtị! Koodu dị mfe… naanị setịpụrụ obosara na ịdị elu etu ị chọrọ ka onye na-ekiri ya gosipụta.
Pịa “Toggle Fullscreen” na ị nwere ike iweta infographic ahụ na ihuenyo zuru oke na pan ma mbugharị n'ime ya, na-ahụ nkọwa niile. Ihe ọzọ bara uru nke usoro a bụ na ị nwere ike itinye akaụntụ Google Analytics gị na onye na-ekiri ya wee hụ ọnụ ọgụgụ nke echiche!
Ekwentị mkpanaka na ahịa gị dị elu
Ọkt 3, 2012 na 11:28 AM
Ndewo ụmụ okorobịa, Cody ebe a, si Delivra. Achọrọ m ikele Doug maka akụkọ a mana nke kachasị mkpa ka onye ọ bụla mara na anyị ahụla nzaghachi dị ukwuu na ozi ederede kwụ ọtọ. Mgbe ụfọdụ ime ihe dị iche, n'onwe ya, na-amasị ndị mmadụ. Ọ na-enyere aka na ozi ahụ mara mma nke ukwuu na ihe ọmụma. Onye na-ekiri Zmags bụ onye na-azọpụta ndụ ma na-arụ ọrụ dị ukwuu na ngwaọrụ nke ụdị ọ bụla (ntụgharị ọzọ dị ukwuu sitere na Doug).
Ọkt 4, 2012 na 6:37 PM
Daalụ Cody! Na nnukwu ọrụ na infographic !!!